Bruno Fernandes oo iska matalay CR7 isagoo tababar la sameynayay saaxiibkiis Diogo Dalot – Gool FM
Bruno Fernandes oo iska matalay CR7 isagoo tababar la sameynayay saaxiibkiis Diogo Dalot
Haaruun March 18, 2020
(Manchester) 18 Mar 2020. Iyadoo ciyaaraha la xannibay – gaar ahaan kubadda cagta – xerooyinka tababarkana la xiray, qaar ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta ayaa weli isku dayaya inay wax uun dhaqdhaqaaq ah sameeyaan.
Xiddigaha ka wada tirsan Manchester United ee Bruno Fernandes iyo Diogo Dalot ayaa iyagoo xareysan sameynayay tababar toogasho goolka ah.
Dalot ayaa twitter-kiisa soo geliyay muuqaalka, iyagoo aad u dhiirran sidoo kalena ay sameynayaan tababar darbooyin ah.
Difaaca Portugal dhowr jeer celiyay darbooyin, waxaana uu u dabaal dagay in jilbaha uu dhulka dhigo.
Halka Fernandes oo bandhig il-qabad leh ku billawday waayihiisa garoonka Old Trafford uu markii hore u dabaal dagayay sidiisii caadiga ahayd.
Dhowr jeer ayuu hareer mariyay goolka kubbad uu laaday iyadoo aan dhulka ku soconin, marna birta ayuu la dhacay, ugu dambeynse markii uu daba mariyay saaxiibkiisa Dalot, Bruno ayaa u dabaal dagay qaabka uu dabaal dago kabtankiisa qaranka ee Cristiano Ronaldo.
Fernandes ayaa arrintaas caddeyn kaga dhigay hadal dhowaan uu jeediyay oo uu ku sheegay in laacibka Juventus inuu yahay shaqsiga tusaalaha uu ka dhigto kuna daysado, sababtaas uu u sameeyey dabaal-degga uu caanka ku yahay CR7.
RASMI: FIFA oo dib u dhigtay koobka cusub ee Kooxaha Adduunka oo lagu ballansanaa in lagu qabto Shiinaha